तपाईंको कम्पनीमा टेक्नोलोजी को परिभाषित गर्छ? | Martech Zone
तपाईंको कम्पनीमा टेक्नोलोजी को परिभाषित गर्छ?
बुधबार, जुलाई 8, 2009 आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१9Douglas Karr
प्रविधि को परिभाषा हो:
वाणिज्य वा उद्योगको लागि विज्ञानको व्यावहारिक अनुप्रयोग
केही समय अघि मैले सोधें,यदि तपाइँको आईटी विभाग नवाचार मार्दै थियो“। यो एक प्रश्न हो जुन धेरै प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गर्यो! धेरै आईटी डिपार्टमेन्ट्ससँग अन्वेषण कम गर्न वा सक्षम पार्ने क्षमता छ ... के आईटी विभागहरूले समेत दम गर्न सक्छन् वा उत्पादकता र बिक्री सक्षम गर्न सक्छन्?
आज मलाई क्रिसबाट भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो कम्पेन्डियम। यो एक उत्साहित कुराकानी थियो र हामी लगभग minutes 45 मिनेट पहिले हामी चाहेको ठाउँमा जाँदै थियौं।
कुराकानीको एउटा चाखलाग्दो अंश छलफल गरिरहेको थियो कि प्लेटफर्म वा एसईओ सेवाहरू किन्ने निर्णय कसको थियो। त्यो निर्णय आईटी प्रतिनिधिको हातमा पर्दा हामी दुबै निस्केका थियौं। म कुनै पनि हिसाबले आईटी पेशेवरहरुलाई बेवास्ता गर्न कोशिस गरिरहेको छैन - म उनीहरूको विशेषज्ञतामा दैनिक आधारमा निर्भर छु। SEO को लागी ब्लगिंग नेतृत्व प्राप्त गर्न को लागी एक रणनीति हो ...aमार्केटिंग जिम्मेदारी.
जे होस्, यो चाखलाग्दो छ कि एक आईटी विभाग अक्सर एक प्लेटफर्म वा प्रक्रिया को आरोप मा राखिन्छ कि व्यापार परिणाम निर्धारण गर्दछ। धेरै पटक, म व्यापार परिणामहरू (नवीनता, लगानी फिर्ता, प्रयोगमा सजिलो, आदि) खरीद निर्णय मा एक backseat लिइरहेको देख्छु।
हामीलाई उनीहरूको कर्पोरेट ब्लगि platform प्लेटफर्मको रूपमा चयन गर्न, प्राय: आईटी विभाग हो जुन विश्वास गर्दछ कि तिनीहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ए मुक्त ब्लगिंग को लागी समाधान। एक ब्लग एक ब्लग हो, हैन?
केहि छैन कि सामग्री अनुकूलित छैन
केहि छैन त्यो प्लेटफर्म सुरक्षित, स्थिर, मर्मत-रहित, बेमानी, आदि छैन।
केहि छैन प्लेटफर्म लाखौं पृष्ठदृश्य र हजारौं प्रयोगकर्ताहरूको लागि स्केलेबल छैन।
केहि छैन यो निर्माण गर्ने कम्पनीले अनुसन्धान र विकासमा सयौं हजारौं डलर खर्च गर्‍यो भने उत्तम अभ्यासहरू र खोज इञ्जिन अनुपालन समावेश गरिएको थियो।
केहि छैन गहन प्रशिक्षणको लागि कुनै आवश्यकता बिना, प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस को उपयोग गर्नका लागि सरल छ।
केहि छैन प्रणाली स्वचालित छ त्यसैले ट्यागिंग र वर्गीकरण को ज्ञान आवश्यक छैन।
केहि छैन जुन हाम्रो स्टाफले हाम्रो ग्राहकहरूको प्रगतिलाई उनीहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्दछ।
केहि छैन प्लेटफर्म चलिरहेको कोचिंगको साथ आउँदछ ब्लगरहरूलाई उनीहरूको सीप विकास गर्न र समयसँगै लगानीमा उनीहरूको प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्न।
SEO को साथ, यो प्राय: उहि तर्क हो। मँ एसईओ तर्कको विपरित पक्षमा छु, तपाईंलाई भन्दै तपाइँलाई एसईओ विशेषज्ञको आवाश्यक छैन। जेरेमीले मलाई यो पोष्टको सम्झना दिलायो ... हो!
मेरो कुरा यो हो कि धेरै कम्पनीहरूसँग कुनै खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन छैन र धेरै सान्दर्भिक ट्राफिकमा हराइरहेको छ। यदि उनीहरूले भर्खर गरे न्यूनतम, तिनीहरूले कम्तिमा त्यो सुन्दर साइट राख्न सक्थे उनीहरूले केहि आगन्तुकहरूको अगाडि १० डलर खर्च गरे। यो पोष्ट कम्पनीको ठूलो बहुमतको लागि लेखिएको थियो जससँग कुनै प्रतिस्पर्धा छैन र कुनै अप्टिमाइजेसन छैन ... यो कमसेकम कम से कम गर्न अनुरोध गरीरहेको थियो।
प्रतिस्पर्धी उद्योगहरूमा कम्पनीहरूका लागि, यद्यपि, %०% अप्टिमाइज गरिएको नजिक पनि छैन। % ०% पर्याप्त छैन। एक उच्च प्रतिस्पर्धी अवधि मा एक १ रैंकिंग प्राप्त गर्न विश्वको एक मुट्ठीभर कम्पनीहरु को एक को विशेषज्ञता आवश्यक छ। यदि तपाईं एक मध्यम प्रतिस्पर्धी खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंको IT विभागले तपाईंलाई # १ मा पुग्न गइरहेको छैन। तपाईं भाग्यशाली हुनुहुनेछ यदि तिनीहरूले तपाईंलाई परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा पनि प्राप्त गर्छन्।
तपाईले आफ्नो आईटी डिपार्टमेन्टलाई तपाईको बिक्री टोलीको चार्जमा राख्नुहुने थिएन, तैपनि तपाईले त्यसलाई टेक्नोलोजीको चार्जमा राख्नुहुनेछ जसले तपाईको कम्पनीलाई बिक्री पाउनबाट बचाउँदछ। यदि तपाइँ प्रविधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ व्यावहारिक रूपमा ... निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ अवसरहरू र फाइदाहरूको पूर्ण अनुसन्धान गर्नुहुन्छ तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ यो एक्लै गर्न सक्नुहुनेछ!
दीर्घकालीन रणनीतिक बजारले साहस लिन्छ
एक्क्ट्याटरेटले ग्राहक सेवालाई ठूलो (सामाजिक) निशानमा पुर्‍याउँछ
ब्लगिङ बीचको भिन्नताको संसार छ मंच र एक SEO रणनीति.
एक ब्लगिङ प्लेटफर्म केवल सफ्टवेयर र हार्डवेयर को एक संयोजन हो, र IT विभागहरु ती सँगै राख्न धेरै राम्रो छन्। त्यहाँ धेरै बिक्रेताहरू पनि छन् जसले यो काम गर्छन्, कि त तिनीहरूसँग स्वामित्व सफ्टवेयर छ, वा तिनीहरूले पहिले नै हार्डवेयरको स्वामित्व वा भाडामा लिएका कारण, वा तिनीहरूसँग यो विशेष IT स्ट्याक कायम राख्न धेरै विशेषज्ञता भएको कारणले। तपाईले आफ्नो ब्लगिङ प्लेटफर्मको व्यवस्थापनलाई इन-हाउस मान्छेहरू र आउटसोर्स गरिएका व्यक्तिहरू बीच कसरी विभाजन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न भनेको क्यानोनिकल "किन्न/निर्माण/उधारो" IT समस्या हो।
एक एसईओ रणनीति, तथापि, तपाईको ब्लगिङ प्लेटफर्मबाट लगभग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। प्लेटफर्मको पर्वाह नगरी तपाईंसँग उत्कृष्ट वा भयानक SEO हुन सक्छ। तर एक एसईओ कम्पनी प्रयोग गर्दै छ छैन तेस्रो-पक्ष आईटी कम्पनी प्रयोग गरे जस्तै। यो Google को भाषामा तपाईंका विचारहरू अनुवाद गर्न सक्ने प्रतिलिपि लेखकहरू भर्ती गर्नु जस्तै हो।
अवश्य, तपाइँ नि: शुल्क, खुला स्रोत ब्लगिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र निष्पक्ष बनौं, डग—वर्डप्रेस सुरक्षित, स्थिर, अत्यधिक अनावश्यक पूर्वाधारमा चल्छ। वर्डप्रेसका प्रयोगकर्ताहरूले डाउ जोन्स, द न्यू योर्क टाइम्स, पीपल म्यागजिन, फक्स न्यूज र CNN समावेश गर्दछ - ती सबैले तपाइँको "लाखौं पृष्ठ हेराइहरू, हजारौं प्रयोगकर्ताहरू" परीक्षण पास गर्छन्। अटोमेटिक (वर्डप्रेस बनाउने मानिसहरू) सँग दशौं लाखहरू छन् उद्यम कोष, जुन मलाई लाग्छ कि एक सुन्दर व्यापक अनुसन्धान र ईन्जिनियरिङ् बजेट गठन गर्दछ। WordPress एक खेलौना होइन।
यद्यपि, WordPress केवल एक ब्लगिङ प्लेटफर्म हो। वास्तवमा, यो मात्र हो आधा एक ब्लगिङ प्लेटफर्म—खुला स्रोत WordPress सफ्टवेयर (यद्यपि WordPress.com सहित अनगिन्ती WordPress होस्टिङ सेवाहरू छन्।) यदि तपाईं विश्वसनीयता वा स्केलेबिलिटीको कुनै पनि डिग्रीमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले सान्दर्भिक हार्डवेयर र विशेषज्ञतामा लगानी गर्नुपर्छ।
त्यसोभए, आईटी विभाग सही छ कि ब्लग केवल एक ब्लग हो र उनीहरूले ब्लगको भाग लिन नि: शुल्क उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। तर अधिकांश काम र सम्भावित मान सफ्टवेयरमा छैन। एक ब्लग भएको लगभग सम्पूर्ण बिन्दु एक व्यापक र निरन्तर SEO रणनीति मार्फत सम्भव बनाइएको छ। र एकचोटि तपाईले महसुस गर्नुभयो कि तपाईलाई के चाहिन्छ, यो केहि चीज हो जसको लागि तपाई तिर्न इच्छुक हुनुपर्दछ।
चुनौती भनेको IT विभागहरूलाई महसुस गराउनु हो कि राम्रो एसईओ मुट्ठीभर मूर्ख चालहरू होइन, यो गाह्रो छ, यो सधैं परिवर्तन हुन्छ, र यसले संसारमा सबै फरक पार्छ।
म पक्का छैन कि तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ वा असहमत हुनुहुन्छ। तपाईं र मलाई थाहा छ कि डाउ जोन्स, द न्यूयोर्क टाइम्स, पीपल म्यागजिन, फक्स न्यूज र सीएनएनले वर्डप्रेस 'जस्तो छ' चलिरहेको छैन। तिनीहरूले यसलाई कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार लागत, विषयवस्तु विकास लागत, खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन लागत, आदि बिना चलाउँदै छन्? तपाईलाई लाग्दैन कि उनीहरूले ती प्लेटफर्महरूको प्रयोगमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई शिक्षा दिन पैसा खर्च गरिरहेका छन्? वा ती प्लेटफर्महरूमा सामग्री पास गर्न विकास? अवश्य पनि तिनीहरू हुन्! ती व्यवसायहरू मध्ये प्रत्येकले उनीहरूको लागि 'नि:शुल्क' प्लेटफर्म काम गर्न धेरै पैसा लगानी गरेको छ।
एक ब्लग केवल एक ब्लग हो, तर ब्लगिङ प्लेटफर्म एक ब्लगिङ प्लेटफर्म मात्र होइन। कीवर्ड बल मिटर, ट्यागिङको स्वचालन, वर्गीकरण र कम्पेन्डियममा सामग्री प्लेसमेन्ट ठूलो भिन्नताहरू हुन्। यसको लागि प्रयोगकर्ताले 'कसरी' ब्लग गर्ने, 'कसरी' आफ्नो सामग्रीलाई अप्टिमाइज गर्ने, र 'के' ब्लग गर्ने भन्ने चिन्तामा बढी समय बिताउन आवश्यक छ। व्यापार ब्लगरहरूले उनीहरूको सन्देशमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ - उनीहरूको प्लेटफर्म होइन।
म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु कि कुनै पनि व्यक्तिले कम्पेन्डियम खोल्न सक्छ र सहज रूपमा पोस्ट गर्न सक्छ र त्यो पोस्ट अनुकूलित हुनेछ। यो WordPress को मामला होइन। वर्डप्रेसको साथ प्रभावकारी रूपमा ब्लग कसरी गर्ने भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा सिकाएको अधिकांश मानिसहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरू प्रत्येक पोस्टमा कति हराइरहेका थिए।
फेरि, आईटी विभागको फोकस प्राय: व्यवसायको फोकस होइन। मैले कम्पनीलाई जोखिममा राखेको छैन भनी सुनिश्चित गर्नका लागि मेरो सफ्टवेयर खरिदहरूको 'समीक्षा' गर्ने मेरो आईटी साथीहरूलाई मैले सधैं प्रशंसा गरेको छु; यद्यपि, तिनीहरूले प्लेटफर्म वा रणनीतिका फाइदाहरू र व्यापारमा यसको प्रभावलाई कहिल्यै पहिचान गर्न सक्षम हुने छैनन्। तिनीहरू केका लागि शिक्षित छन्, तिनीहरूको अनुभव के छ, न त तिनीहरूले केको लागि उपयोग गर्नुपर्छ।
व्यवसायीहरूलाई व्यापार निर्णयहरू गर्न दिनुहोस्! IT लाई उनीहरूको भरपर्दो सल्लाहकार हुन दिनुहोस्।
म तपाईको समग्र बिन्दुसँग सहमत वा असहमत छैन, म तपाईको टिप्पणीलाई स्पष्ट गर्दैछु।
कसैले पनि भनेन कि WordPress को ठूला प्रयोगकर्ताहरूले अतिरिक्त अनुकूलन र पूर्वाधार लागत बिना सफ्टवेयर चलाउँदैछन्। तिमीले भन्यौ "के कुरा नगर्नुहोस् कि प्लेटफर्म लाखौं पृष्ठदृश्यहरू र दशौं हजार प्रयोगकर्ताहरूको लागि मापनयोग्य छैन", तर त्यो सत्य होइन। यो स्तरमा WordPress (वा Blogger, वा Drupal वा DotNetNuke वा Compendium र यस्तै अन्य) मापन गर्न स्पष्ट रूपमा सम्भव छ, तर तपाईंले हार्डवेयर, समर्थन सफ्टवेयर र प्राविधिक विशेषज्ञतामा लगानी गर्नुपर्छ। हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो सम्भव, यो तपाईं आफैले गर्न चाहनुहुन्छ वा अरू कसैले तपाईंको लागि यो गर्न चाहनुहुन्छ भने।
, हो एक ब्लगिङ प्लेटफर्म केवल एक ब्लगिङ प्लेटफर्म हो। यो सफ्टवेयर र हार्डवेयरको संयोजन हो जसले ब्लग उत्पादन गर्छ। पक्कै पनि, केहि फरक सुविधाहरू छन्, र ती सुविधाहरू अधिक मूल्य र अधिक पैसा लायक हुन सक्छ। तपाईंसँग IndyCar, पूर्ण-विशेषता भएको BMW वा भरपर्दो ट्रक होस्, तपाईंसँग एउटा अटोमोटिभ गाडी छ जुन पोइन्ट A बाट बिन्दु B सम्म चलाउन सकिन्छ। के यो सत्य हो कि ती मध्ये केही गाडीहरू निश्चित कार्यहरूको लागि राम्रोसँग उपयुक्त छन्? बिल्कुल। प्रश्न यो छ: तपाइँ कुन कार्य हासिल गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ?
म पक्का छु कि यदि तपाइँ कम्पेन्डियम र कुनै पनि खुला स्रोत ब्लगिङ प्लेटफर्मको साथ एक प्रयोगकर्तालाई छेउमा राख्नुहुन्छ भने, कम्पेन्डियम ब्लगमा पोष्टले थप ट्राफिक ड्राइभ गर्नेछ - भले पनि पोष्टहरू शब्द-शब्द-शब्द समान थिए। त्यो तपाईको कम्पनीको लागि ठूलो मूल्य हो! यदि यो प्रयोग केस प्रतिनिधि हो भने, यसले CB को लागि उत्कृष्ट बिक्री बिन्दु बनाउँछ।
तर जाँच गरौं किन त्यो एकल पोस्ट अधिक ट्राफिक प्राप्त हुनेछ। यसको कारण प्रायः कम्पेन्डियम हो कम्पनी निरन्तर रणनीति अपरेशन छ। तपाइँ सधैं कोडबेस अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ ग्राहक पोष्टहरूमा लिङ्क गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई प्रतिष्ठा निर्माण गर्न मद्दत गर्न। तपाइँ ग्राहकहरु संग भेट्नुहोस् र अतिरिक्त प्रशिक्षण र स्रोतहरु प्रदान गर्नुहोस्। तपाईं अत्यधिक भरपर्दो पूर्वाधार कायम राख्नुहुन्छ। धेरै, यदि एक नि: शुल्क उपकरण मा कम्पेन्डियम को धेरै फाइदा छैन भने चलिरहेको सेवा र समर्थन हो जुन तपाइँ तपाइँको सफ्टवेयर, तपाइँका ग्राहकहरु, र उनीहरुको सामग्री को लागी प्रदान गर्दछ।
र फेरि, यो एक अद्भुत लाभ हो र तपाईंका धेरै ग्राहकहरू धेरै खुसी छन्। तर यो तपाईको सफ्टवेयर र हार्डवेयर "ब्लगिङ प्लेटफर्म" को आधारभूत भाग होइन। तपाईले फरक-फरक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर समान नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ (तर यो धेरै काम हुनेछ!) यो प्रभावमा कम्पनीहरूले मन पराउने कुरा हो DK New Media हरेक दिन गर्नुहोस्। कर्पोरेट ब्लगिङको लागि निर्णय लिनेमा संलग्न जो कोहीले यी सूक्ष्मताहरू बुझ्न आवश्यक छ।
यहाँ मूल मुद्दा एउटा विभागको जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ र अर्कोको सुरु हुन्छ। त्यो प्रश्नको कुनै सजिलो जवाफ छैन। अझ नराम्रो कुरा, यदि त्यो लाइनको कुनै पनि भाग कम्पनी बाहिर तेस्रो पक्ष विक्रेतामा जान्छ भने, त्यहाँ संस्थाहरू बीच धमिलो ठाउँहरू हुन थाल्छ र जोखिम र फाइदाहरू मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो हुन्छ। यदि बाहिरी मानिसहरूको पहुँच छ भने तपाईं आफ्नो परिधि कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ? वा, मार्केटिङ पक्षबाट: तपाइँ कसरी पक्का हुनुहुन्छ कि आउटसोर्स प्लेटफर्म प्रदायकले तपाइँको ब्रान्डलाई बिगार्ने र बिगार्ने छैन? यी जोखिमहरू साना वा ठूला हुन सक्छन्, तर तिनीहरू शून्य होइनन्।
म पक्का छु कि टेक्नोलोजी सम्बन्धी धेरै निर्णयहरू IT द्वारा व्यावसायिक प्रभावहरूको पर्याप्त सम्मान बिना नै गरिन्छ। तर समस्या दुबै तरिकामा जान्छ - व्यवसायी मानिसहरूले IT बारे थप बुझ्न आवश्यक छ र यसको विपरीत। एकअर्काको विरुद्धमा नभई मिलेर काम गर्दा सबैको फाइदा हुन्छ ।
त्यो स्पष्टीकरण को लागी धन्यवाद, रोबी! म अन्तिम टिप्पणीहरूमा उभिनेछु। म मेरो IT स्रोतहरू मेरो सल्लाहकार हुन विश्वास गर्छु त्यसैले म केहि मूर्ख काम गर्दिन। यद्यपि, म तिनीहरूलाई प्लेटफर्म र रणनीतिहरूको अन्तिम निर्णय दिने छैन जुन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि उत्तम हितमा छ। हामी सबैको आ-आफ्नै बलहरू छन् र तिनीहरूलाई उचित रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ।